पुनर्जिवन होमीयोप्याथिक क्लीनिकमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र अशक्तहरुको स्वास्थ्य चेक जाँचमा पैसा नलाग्ने » Purbihotline
March 31, 2019 पूर्वी हटलाइन	0 Comments
धरान । सुनसरीको धरान–९ आचार्यलाइनमा सञ्चालनमा ल्याइएको पुनर्जिवन होमीयोप्याथिक क्लीनिकमा स्वास्थ्य सेवा लिनेहरुको संख्या दैनिक बढिरहेको छ । सञ्चालनमा ल्याइएको छोटो अवधीमै स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या उल्लेखीय रहेको वरिष्ठ होमीयोप्याथिक चिकित्सक डा. योगेन्द्र राईले बताए ।
डा. योगेन्द्र राईका अनुसार गत माघ २६ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको क्लीनिकबाट फागुन ४ गतेसम्म सेवाग्राहीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच गरिएको थियो । सात दिनसम्म गरिएको चेक जाँचमा १ दिनमा २० जनासम्मले निःशुल्क सेवा लिएका थिए । उक्त क्लीनिकमा दैनिक १८ जनाले अकुपञ्चर सेवा पनि लिइरहेका छन् । यो सेवा अकुपञ्चरिष्ट भवानी भट्टराईले दिइरहेका छन् ।
उक्त क्लीनिकमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्तहरुको स्वास्थ्य चेक जाँच निःशुल्क गरिने डा. योगेन्द्र राईले बताए । यहाँ नसा तथा पुराना सम्पूर्ण रोगहरुको सफल उपचार गरिने दावी डा. योगेन्द्र राईको छ । यसका साथै प्रत्येक सोमबार सबै उमेर समूहका सेवाग्राहीहरुको स्वास्थ्य निःशुल्क चेक जाँच गरिन्छ । पुनर्जिवन होमीयोप्याथिक क्लीनिक प्रा.लि.सञ्चालन भएसँगै ५ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
← नन्दुकुमार थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीति छाडे, थापाले भने–विप्लव नेकपालाई समर्थन छैन, पार्टीको कार्यक्रममा जान्न
अंग्रेजी माध्यमबाट निःशुल्क पढ्न पाउने भएपछि जनता माविमा फारम भर्ने विद्यार्थीको लर्को, २ सय ४० को कोटामा ९ सय नाघ्यो →